Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > အားကစားသတင်း
ဆိုးသွမ်းပရိသတ်ကြောင့် ဆူဇူကီးဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် လုံခြုံရေး ပိုမိုတင်းကြပ်မည်	အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၃ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သော AFC U-22 ချန်ပီယံရှစ် ဘောလုံးပွဲတွင် ပရိသတ်အချို့ ၏ ဆိုးသွမ်းသည့် အားပေးမှုကြောင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ရသော မြန်မာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	ဂျပန် ခြေစမ်းပွဲများတွင် မြန်မာအသင်း ရလဒ်ဆိုးရွားနေ အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၉ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက် ခြေစမ်းပွဲများ ကစားရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်းသည် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ဂျေလိဂ် (၁) ကလပ် ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	ထိုင်းကို အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲ တက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၁ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	အာဆီယံ ချန်ပီယံရှစ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးအသင်း ကတော့ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ထိုင်းအသင်းကို ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	မြန်မာကလေးများကို လီဗာပူးလ်ကစားသမားဟောင်း ဂျွန်ဘမ်းစ်ချီးကျူး	ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၅၆ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	Digicel ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး ကလေးငယ်များကိုဘောလုံးပညာ ပို့ချပေးနေသော လီဗာပူးလ် ကစားသမားဟောင်း ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	အာဆီယံ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာက ဖိလစ်ပိုင်ကို ဂိုးပြတ်နိုင်	စနေနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေသည့် အာဆီယံအမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် (AFF Women’s Championship 2012) ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ အဖွင့်ပွဲစဉ်တွင် ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	နည်းပြ ဂျိုးဇက်ရီဟာဂျယ်နှင့် ဧရာဝတီယူနိုက်တက်တို့လမ်းခွဲ	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၇ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	ယခုနှစ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ အမှတ်ပေးဇယားတွင် အဆင့် ၅ နေရာသာရရှိခဲ့သော ဧရာဝတီအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေသည့် ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံသား နည်းပြချုပ် ဂျိုးဇက်ရီဟာဂျယ်နှင့် ဧရာဝတီ ယူနိုက်တက် ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	မြန်မာဆိုးသွမ်းပရိတ်သတ်ကြောင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ရ	စနေနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၄၁ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် AFC U-22 ချန်ပီယံရှစ် ခြေစစ်ပွဲ(Group-G)ပွဲစဉ်များတွင် ပရိသတ်အချို့၏ ဆိုးသွမ်းသည့်အားပေးမှုများကြောင့် ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	ချန်ပီယံဖြစ်လျှင် ကမ္ဘောဇဘောလုံးအသင်း ဆုကြေးကျပ်သိန်း ခြောက်ထောင်ရမည်	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၅၇ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် အမှတ်ပေးဇယားတွင် ဒုတိယနေရာ၌ ရပ်တည်နေသော ကမ္ဘောဇအသင်း အနေဖြင့် ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့ပါက ဆုကြေးငွေသိန်း ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	ပရိသတ် သောင်းကြမ်းမှု ရတနာပုံအသင်း ဒဏ်ငွေဆောင်ရ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၀၈ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	ရတနာပုံအသင်းနှင့် ဇေယျာရွှေမြေ အသင်းတို့ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ကစားစဉ်အတွင်း ရတနာပုံအသင်းကို အားပေးသည့်ပရိသတ်မှ ကစားကွင်းအတွင်းသို့ ကျောက်ခဲ၊ ရေသန့်ဘူး၊ သစ်သားစငယ်များဖြင့် ပစ်ပေါက် ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	ရတနာပုံ နည်းပြချုပ်နှင့် လက်ထောက် ပွဲကြီးကြပ်ခွင့်ပိတ်ခံရ	တနင်္လာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၀ မိနစ်	လင်းကိုကိုထက်	မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဒိုင်လူကြီးများကို ဝေဖန်ပြောဆိုသည်ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ရတနာပုံ အသင်းနည်းပြချုပ်နှင့် လက်ထောက်နည်းပြတို့နှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီမှ ...
အပြည့်အစုံသို့ ...	« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 12နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 2	မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲ
မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲ မကစားမှီ ရင်းနှီးစွာ နှုတ်ဆက်နေစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်၊ မဇ္ဈိမ) ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းတွင် ၂၀၁၂၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁) ညနေ (၄) နာရီ အချိန်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။ မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူအသင်းတို့ တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီဖြင့် သရေကျ သွားခဲ့သည်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတော် သီချင်းသီဆိုနေသော စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းအား တွေ့ရစဉ်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတော် သီချင်းသီဆိုနေသော စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းအား တွေ့ရစဉ်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် သီချင်း သီဆိုနေသာ မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းအား တွေ့ရစဉ်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် သီချင်း သီဆိုနေသာ မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းအား တွေ့ရစဉ်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင်တို့ ခြေစမ်းပွဲ မကစားမှီ ပွဲထွက်လာသော မြန်မာလက်ရွေးစင် (၁၁) ဦး အားတွေ့ရစဉ်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲ မကစားမှီ ပွဲထွက်လာသော စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် (၁၁) ဦး အားတွေ့ရစဉ်။မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲတွင် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေကြစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်၊ မဇ္ဈိမ)မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲ အပြီးတွင် မြန်မာအသင်းနှင့် စင်္ကာပူ အသင်းတို့အား နှုတ်ဆက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် အားတွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်၊မဇ္ဈိမ)မြန်မာနှင့် စင်္ကာပူ ခြေစမ်းပွဲမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် စင်္ကာပူလက်ရွေးစင် တို့ခြေစမ်းပွဲတွင် မြန်မာအသင်းအတွက် ချေပဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့သော ဒေးဗစ်ထန်းအား ပွဲအပြီးတွေ့ရစဉ်။	ကြော်ငြာ
We have 139 guests and 1 member online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved